Tag: fandefasana | Pejy 2 amin'ny 2 | Martech Zone
Miakatra any Chicago ao amin'ny IRCE aho ary mankafy tanteraka ilay hetsika. Goavana tokoa ny fampirantiana ka tsy azoko antoka fa hamakivaky ilay hetsika manontolo aho nandritra ireo andro roa nahatongavako ireo - misy orinasa mahatalanjona hosoratanay. Ny fifantohana adala tanteraka amin'ny valiny refesina ataon'ny mpampiranty rehetra eto dia mamelombelona ihany koa. Indraindray rehefa manatrika hetsika ara-barotra hafa aho dia toa ny sasany amin'ireo seho sy ifantohana
Ny ecommerce dia siansa - saingy tsy mistery izany. Ireo mpivarotra an-tserasera tsara indrindra dia nanadio làlana ho antsika sisa amin'ny alàlan'ny fampiharana paikady fitiliana an'arivony sy ny fanomezana valiny data ho hitan'ny hafa sy ianarany. Androany, efa ho ny ampahatelon'ny fivarotana mponina amin'ny Internet an-tserasera. Ho an'ireo mpivarotra am-pivarotana, ity isa ity dia manaporofo ny fitomboan'ny herin'ny varotra an-tserasera. Mba hisarihana ireo mpanjifa mifandray ireo, ny mpivarotra dia tsy maintsy manao ny fivarotana amin'ny tranokalan'izy ireo ho mahafinaritra,
Tsy azoko antoka fa azonao atao ny mampitovy an'ireto paikady roa amin'ny fitaoman'ny mpanjifa ireto. Toa ahy fa ny fihenam-bidy dia fitaovana lehibe hahatonga ny olona mankany amin'ny tranokalan'ny ecommerce-nao, fa ny fandefasana maimaim-poana dia mety ho fomba hampiakarana ny tahan'ny fiovam-po. Liana ihany koa aho hoe ahoana ireo mpivarotra varotra tsy mivadika. Raha mihena be ny fihenan-tsasatrao, moa ve ny olona hiverina sy mividy andro tsy misy fihenam-bidy? Raha manolotra fandefasana maimaim-poana ianao, tsy endri-javatra ao amin'ny tranokalanao ve izany